Shiinaha Qayb ahaan soo bandhigida warshadaha wax soo saarka shirkadda iyo soosaarayaasha | Zhenyuan
Soo bandhig qayb ka mid ah alaabada shirkadda
Horumarinta sayniska iyo tikniyoolajiyadda, codsiga qaab dhismeedka birta ee injineernimada dhismaha ayaa aad iyo aad ugu ballaaran adduunka. Alxanka waa farsamo farsamo aad muhiim u ah wax soo saarka qaab dhismeedka birta. Sida laga soo xigtay tirakoobka ee dalalka horumariyo warshadaha, kaliya bir ah loo isticmaalo ka dib markii alxanka qaadataa ilaa 45% ka mid ah wax soo saarka bir sanad walba. Shiinaha ilaa dhamaadka 1980s, qaab dhismeedka alxanka. wuxuu tiriyay 30% waxsoosaarka birta.
Sanadkii 1992, soo saarista birta Shiinaha waxay ahayd 80 milyan oo tan, laakiin dhammaadkii 1997, soosaarka birta Shiinaha wuxuu gaaray 94 milyan oo tan. Marka loo eego isbeddelka horumarka, soo saarista birta Shiinaha ayaa dhowaan jabi doonta 100 milyan oo tan ka dib markay soo gasho qarniga cusub.
Noocyada qaab-dhismeedka birta:
Birta rogta kulul (birta xagasha, birta-birta, birta kanaalka, tuubada birta, iwm), sameynta bir dhuuban-khafiif ah, saxan bir ah, qabow iyo xarig silig ah sida walxaha aasaasiga ah, adoo ku xiraya alxanka, balka ama isku xidhka rivet, sida ku xusan qawaaniin gaar ah oo lagu xirayo dhismooyinka aasaasiga ah, oo aan caadi aheyn alxanka, balka ama isku xirka rivet ku xir xirmooyinka aasaasiga ah ee dhismaha qaab dhismeedka birta ah si uu ugu adkeysto culeyska.
Awood sare iyo cufnaan yar Awoodda birta ayaa marar badan ka badan tan alwaax, leben iyo dhagax, shubka iyo qalabka kale ee dhismaha. Sidaa darteed, marka culeyska iyo xaaladuhu isku mid yihiin, qaab dhismeedka ka sameysan birta ayaa leh culeys dhimanaya oo yar, qaybo yar yar ayaa loo baahan yahay, waana mid ku habboon gaadiidka iyo kacsiga.
(2) Balaastikada wanaagsan iyo adkeysiga.Steel waxay leedahay balaastik wanaagsan, guud ahaan, kama imaaneyso culeys xad dhaaf ah ama culeys xad dhaaf ah oo deegaanka ka imanaya oo ku yimid jabka lama filaan ah, laakiin wuxuu u muuqdaa ka hor isbedelka weyn ee astaanta, si loo qaado talaabooyin sixitaan ah Birta ayaa sidoo kale leh adkeyn wanaagsan iyo la qabsi xoogan oo ku saabsan culeyska firfircoon ee ku shaqeynaya qaab dhismeedka, kaas oo bixiya dammaanad lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay isticmaalka nabdoon ee dhismaha birta.
Waxyaabaha labiska ah Qaab-dhismeedka gudaha ee birtu waa isku mid, sifooyinka jireed iyo farsamo ee dhammaan tilmaamaha asal ahaan waa isku mid, oo aad ugu dhow jirka isotropic, oo ku dhex jira culeysyo kala duwan, birta ku jirta xaaladda laastikada ku habboon, iyo aasaasiga ah malaha ay adeegsadeen makaanikada injineernimada ayaa ah mid iswaafaqsan, sidaa darteed natiijooyinka xisaabintu waa sax oo waa la isku halleyn karaa.
Qaab dhismeedka birtu wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan oo la farsameeyay iyo taarikada birta ah, kuwaas oo laga sameeyay qaybo aasaasi ah iyada oo loo adeegsanayo alxanka, isku xidhka ama isku xidhka rivet, ka dibna loo qaado goobta si loogu shiro oo loo kala jaro. , Wareegga dalabku waa gaaban yahay, waxtarkiisu sarreeyaa, iyo dayactirka, beddelka ayaa sidoo kale haboon.Habkan dhismaha ee waxsoosaarka warshadda iyo rakibaadda goobta wuxuu leeyahay faa'iidooyinka wax soo saar ballaaran oo ballaaran iyo saxsanaanta sare ee alaabooyinka la dhammeeyay, wuxuuna abuuray xaalado lagu yareynayo kharashka iyo keenista ciyaarta faa'iidooyinka dhaqaale ee maalgashiga.
(5) Qaab dhismeedka birta birta ah ee birta ah way fududahay in miridhku ku dhaco hawada, gaar ahaan qoyaanka ama daxalka daxalka oo si dhakhso leh u dhex gala, sida had iyo jeer u baahan dayactirka iyo dayactirka, sida miridhku, dahaadhka, iwm. sare.
Caabbinta heerkulka sare ee liita.Shaartu uma adkeysato heerkulka sare, iyada oo kororka heerkulka, xoogga birta ayaa yaraan doonta. Dabka, qaab dhismeedka birta ah ee aan lahayn wax ilaalin ah ayaa kaliya lagu hayn karaa illaa 20min, sidaa darteed qaab dhismeedka birta muhiimka ah waa inuu fiiro gaar ah u yeeshaa qaado talaabooyinka ka hortagga dabka, sida qaab dhismeedka birta ah ee ka baxsan shubka rootiga ama waxyaabaha kale ee dabka, ama ku buufin dahaadhka dabka dusha sare ee qaybaha.
Bandhigga alaabooyinka dhammeeyey kahor rinjiyeynta ayaa la dhammeeyaa iyadoo loo eegayo lambarka sawirka. Lambarku wuxuu tilmaamayaa in qaybaha aan rinjiyeysnayn loo dhiibo sida ay isugu xigaan tirada, iyada oo aan loo eegin gaadiidka ama rakibaadda
Hore: Muuqaalka waxsoosaarka qayb ahaan ka soo baxa warshadda
Xiga: Codsiga alaabada shirkadda
Muuqaalka waxsoosaarka qayb ahaan ka soo baxa warshadda
Soo-saarista shirkadda iyo hordhaca dhismaha